Kumele adlulise ukuphoxeka uMalesela ozobhekana noSuthu - Impempe
Kumele adlulise ukuphoxeka uMalesela ozobhekana noSuthu
UDan Malesela ocija iChippa United
Kuzomele akudlulise ukuphoxeka akutholile umqeqeshi weChippa United, uDan Malesela, ngesikhathi iqembu lakhe libhaxabulwa yi-Orlando Pirates ngo 3-0 emdlalweni weDStv Premiership ngoMgqibelo.
Phela asikho isikhathi sokulibala ukuphoxeka njengoba imidlalo yeligi iza ilekanyana, kumele bavuke bazithathe. NgoLwesithathu iChilli Boys izobhekana naMaZulu FC komunye umdlalo onzima weligi eSisa Dukashe Stadium, ngo-5 ntambama.
Ukuphoxeka bekubhalwe ebusweni kuMalesela ngemuva kokuthi iqembu lakhe lenze amaphutha amaningi aholele ekutheni babhudluzwe yiPirates ngo 3-0 ekhaya.
“Umdlalo lapho senze khona amaphutha. Iphutha lokuqala lishintshe yonke into ngomdlalo. Ngezinye izikhathi sizithole sinengcindezi kakhulu ngoba bebesicindezela. Lezi yizinto okumele sibhekane nazo kodwa kulokhu asenzanga neze kahle. Senze leliya phutha elenziwe unozinti wethu futhi lisinike izinkinga eziningi,” kusho uMalesela.
Unozinti weChippa u-Ayanda Mtshali wenze isimanga efika ebholeni kuqala kodwa wangenza lutho, ladlula ibhola wagcina elibeke phakathi uDeon Hotto weBucs.
“Ngaphandle kwalokho kukhona abadlali abebecashile ngesiwombe sokuqala kade sibadinga kakhulu, ngenxa yengcindezi ebesinayo. Kodwa abanye abadlali bebecashile, besidlala sishoda ngabadlali ababili noma abathathu, futhi akwehlanga kahle kimina lokho. Nokho ekugcineni ngesikhathi silandela emuva ngamagoli amabili, sikhulumile ngesikhathi sekhefu, senza ushintsho kwathi ukuba ngcono. Besingalishaya igoli ukube asitatazelanga kodwa akwenzekanga.
“Igoli lesithathu, eish, ngisafuna ukubona kahle ukuthi kwenzekeni. Kodwa ziningi izinto ezingahambanga kahle kulo mdlalo, angifuni ukubalisa nokho. Kwesinye isikhathi awazi ukuthi abantu badlani uma beza emidlalweni,” kusho uMalesela.
UMalesela usawine imidlalo emibili kuphela yeligi selokhu ethathe izintambo kwiChilli Boys, yize iqembu lidlala ibhola elihle kakhulu. Akakhathazekile kakhulu ngalokhu yize efuna bashintshe izinto ngoba nemidlalo iyahamba.
“Akukho mayelana neqembu esinalo kodwa kumayelana nezinhlelo esinazo. Zidinga abantu abaqinile nabalambele ukuwina. Kodwa ngiqine idolo futhi ngiyazi abantu abaningi bayabona ukuthi uma sizimisele ngokuphusha singakwenza lokho. Nginethemba lokuthi sizowathola amaphuzu uma isikhathi sesivuma. Ngicabanga ukuthi singaqala ukwenza lokho ngoLwesithathu. Nokho kumele siziphushe ukuze senze lokho. Uma sizokwenza amaphutha njengoba senzile, sizozenzela izinto zibe lukhuni,” kuphetha uMalesela.
IChilli Boys ayimile neze kahle kwi-log yePremiership. Njengamanje isendaweni ka-13 ngemuva kwemidlalo engu-18 nokufakazela kona ukuthi iyawadinga amaphuzu.
Previous Previous post: Ugezeke ngaphakathi bebuya namaphuzu agcwele eVenda owe-Arrows
Next Next post: Kuhlukene imibono ngokuwina kukaBen 10 isicoco seligi neRangers